Si dhakhso ah nuqul ka sameyso sawirka gidaarka Mac si aad ugu isticmaasho meel kasta oo aad rabto | Waxaan ka socdaa mac
Si dhakhso ah nuqul ka sameyso sawirka gidaarka Mac si aad ugu isticmaasho meel kasta oo aad rabto
Mararka qaarkood waxaan ubaahan karnaa ama aan xiiseyneynaa inaan helno sawirka gidaarka Mac si aan u isticmaalno meel oo aan u helno waxaan heysanaa laba ikhtiyaar. Xulashada ugu dheer ayaa ah inaad si toos ah ugala soo gasho galka / Maktabadda / Sawirada Sawirada laga helo Raadiyaha oo aan ka helno sawirka aan dooneyno inaan adeegsanno. Marka la helo waxa ay tahay inaan sameyno waa inaan si toos ah ugu jiideyno desktop-ka sidaasna sawirka lagu labalabeynayo si aan ugu qabanno wax alla wixii aan dooneyno. Laakiin mid kale ayaa jira Ikhtiyaarka ugu fudud uguna dhaqsaha badan si loo badbaadiyo loona nuqulo sawirradan cajiibka ah galka asalka ah ee Desktop Pictures.
Ikhtiyaarkan ayaa si fudud u maraya marin u helka ikhtiyaarka ka beddel darbiga darbi-jiifka adigoo gujinaya midig, mar gudaha gudaheeda ah waa inaanu xulnaa wallpaper oo aan dooneyno inaan nuqul ka sameysano si aan u isticmaalno meel kasta iyo si toos ah uga soo jiid daaqadda halka sawirka lagu tusay desktop-ka ama galka in aan rabno inaan keydinno. Way fududahay tan. Mar alla markii aad dul dhigto desktop-ka, sawirku wuxuu leeyahay isla xallinta iyo cabbirka sida gidaarka, sidaa darteed waxaan ku sameyn karnaa wax alla wixii aan doonno.
Runtu waxay tahay in labada qaabba ay si aad u wanaagsan u shaqeeyaan laakiin kuwa aan sidaa ugu baran inay adeegsadaan Raadiyaha oo waxay rabaan inay helaan nuqul ka mid ah gidaarada ay isticmaalaan wakhti kasta, way samayn karaan iyagoon toos toos uga marin wadada / Maktabada / Sawirada Sawirka, wax dhakhso badan oo sahlan dad badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Si dhakhso ah nuqul ka sameyso sawirka gidaarka Mac si aad ugu isticmaasho meel kasta oo aad rabto
Xanta ayaa Apple gelisay suuqa AR
Apple waxay xarun cusub oo xog ah ka samaysanaysaa Arizona